Uthelekiso lwee-Elements of Elephantsgativity Standards
Umbuzo: Iyintoni i-Element Mostronegative Element?
I-Electronegativity ingomlinganiselo owodwa wekhono lomzimba wokwenza izibophelelo zeekhemikhali ngokutsala i-electron . Nantsi ukukhangela kwinqanaba le- electronegative kunye nenkcazo yokuba kutheni unamandla okhetho oluphezulu.
Impendulo: I-Fluorine yinto ephezulu kakhulu yokukhetha. I-Fluorine ine-electronegativity ye-3.98 kwi-Eleing Electronogativity Scale kunye ne- valence ye-1 .
I- athomu ye-fluor idinga enye i-electron ukuba igcwalise igobolondo ye-electron yangaphandle kwaye ifumaneke ukuzinza, kungenxa yoko i-fluorine yamahhala ikhona njenge-F - ion. Ezinye izinto ezikhethiweyo zi-oxygen kunye ne-chlorine. I- hydrogen eyakhiweyo ayinayo iphakamileyo ye-electronegativity kuba, nangona igobolondo ezaliswe ngesigamu, ilahlekelwa lula i-electron kunokuba izuze enye. Ngaphansi kweemeko ezithile, i-hydrogen yenza i-H - ion kuneH + .
Ngokuqhelekileyo, zonke izakhi zeqela le-halogen zinexabiso eliphezulu lolawulo lwe-electronogativity. Iimpawu ezingezantsi kwinqanaba le-halogeni kwitheyibhile lexesha elifanelekileyo libuye libe ne-electronegativities ephezulu. Izinto ezisegumbini legesi elihle kakhulu lixabiso elincinane kakhulu lolawulo lwe-electronegativity kuba ziphethe iigolon ze-valence ezipheleleyo.
Uninzi lwe-Electropositive Element
Uluhlu lwexesha loLawulo lweCandelo loLawulo
Iimpawu zemiSebenzi yeePeriodic
Yiyiphi Incwadi Ayifumaneki kwiTable Périodic?
Ngaba ndifanele ndifunde isiMandarin okanye isiCanton?
Oko kuthetha ukuthatyathwa
Yintoni Umfundi weKholeji yesiGaba sokuQala?